June | 2008 | လဂွန်းအိန် | Page 2
ဒို့ အမျိုးနဲ့ ဝေး။
Posted by lagoonaing under ပြဇာတ် | Tags: ပြဇာတ် |
ဒါကတော့ လူရွင်တော်အငြိမ့်လေးတွေပါ ။ အပျင်းပြေ ရယ်မောကြဖို့ ရည်ရွယ်ပါတယ် ။
ကားလိပ်အဖွင့် … အခန်း(၁)
လူရွင်တော်အ၀တ်အစားများဖြင့် လူ ၄ ယောက် ရပ်နေ၊ ကားလိပ်ကုန်သည်အထိ လက်နောက်ပစ်ပြီးရပ်ကြ၊ ကားလိပ်ကုန်လျှင် တစ်ယောက်ကစပြော ..
ကဲ .. ကျုပ်တို့ လူရွင်တော် အဖွဲ့ က နှုတ်ခွန်းဆက်ကြရအောင် .. (၄ယောက်သားသံပြိုင်)
ဘာမထီ တဲ့ ငါတို့သည်၊ တစ်လောကလုံးနဲ့တစ်ယောက်လဲ ရင်ဆိုင်မည်။မြန်ပြည်တစ်ခွင်ပြဲပြဲစင်
ကဲ ကို ဖျောက်ပြေးရေ …
ကို ဘိန်းဇိမ် ..
ရှိပါတယ်။ ဘပန်းသေ ..
ကို အူကျရွှေပန်း လေးရော
ပန်းသေ။ ။ကောင်းပါပြီ..။ဒီလို မင်္ဂလာရှိတဲ့ ညချမ်းမှာ တို့ရဲ့ ကျပ်ပြေး နေ၀င်အငြိမ့်အဖွဲ့ကြီးအနေနဲ့ ကပြဖျော်ဖြေ ရတာ တယ်ပဲ ပျော်ရွင်ရပါတယ် ။
ဖျောင်ပြေး။ ။ဟုတ်ပါတယ်ဗျာ။ခုဆိုရင် ကျွန်တော်တို့ စုစည်းနေထိုင်တဲ့… အဲ ..အဲ စုမပါဘူး..ဟဲဟဲ..။ကျွန်တော်တို့ ပေါင်းစည်းနေထိုင်တဲ့ ဟောဒီ ကျပ်ပြေးမြို့တော်ကြီးဟာဆိုရင်ဖြင့် ပြည်သူအများပို့သတဲ့ မေတ္တာနဲ့ တစ်နေ့တစ်ခြား စည်ပင်လို့လာနေတာ အားလုံးလဲအသိမဟုတ်လား။ဒါတွေက ဘပန်းသေ၇ဲ့ အမျှော်အမြင် ရှိရှိဆောင်ရွက်
ဘိန်းဇိမ်။ ။ဟုတ်ပါ့ဗျာ ကိုဖျောင်ပြေးရေ။ခုဆိုရင် ကျုပ် တို့ရဲ့ မြို့တော်သစ်ကြီးဟာ အမှောင်တွေကြားမှာ မီးပြောင်ပြောင် နဲ့
ကမ္ဘာတစ်လွှား လွန်ကြော်ကြားနေပြီပဲမဟုတ်လား။ ဒါတွေဟာကျုပ်တို့ အတွက် အလွန်မှ ပဲ ဂုဏ်တက်စရာပါပဲ။ ဘပန်းသေ
လဲသေခါနီးမှာ အိမ်ကြီးခမ်းနားစွာနဲ့ ရိက္ခာယူနေနိုင်၊ကျုပ်တို့အဆွေအမျိုးတွေလဲ မြို့တော်သစ်တည်ဆောက်ရေးမှာ ကန်ထရိုက်တွေ ချပေးလိုက်တာ မည်သည့်ခေတ်နဲ့မှ မတူတော့လောက်အောင် ကြီးပွားကုန်ကြပြီမဟုတ်လားဗျာ..
အူကျရွှေပန်း။ ။ဟုတ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ ဘဘပန်းသာမရှိခဲ့ဘူးဆိုရင်တော့ ကျွန်တော်တို့မှာ တစ်သွေးတစ်မွေးနဲ့ ဒီလိုဖြစ်လာမှာမဟုတ်ဘူးနော်..။ သူရှိပေလို့ကျွန်တော်တို့တစ်တွေ မည်သို့မည်ပုံ သိုရ၊၀ှက်ရ၊
သတ်ရ၊တိုက်ရမယ်ဆိုတာ သိလာမှာမဟုတ်ဘူး။ ခုသူ့လို အာစရိယဂုဏ်ပြောင်တဲ့ ပိုင်အိုးနီးယားဆန်ဆန် သွန်သင်ပေးလို့ ကျုပ်တို့ တစ်တွေ ဒီလို အားပြည့်အင်ပြည့်နဲ့ ဗြောင်ကျကျ လိမ်နိုင်၊ညာနေနိုင်တာကလားဗျာ။
ပန်းသေ။ ။ဟဲဟဲ .. သိပ်လဲမြှောက်မနေကျပါနဲ့ဦးလေ။ ဟဲဟဲ .. ကျုပ်ကဒီလောက်လဲမစွမ်းပါဘူးဗျာ။ ဟဲဟဲ ..ဆက်ပြောကြပါဦး။ဟဲဟဲ..။
ဘိန်းဇိမ်။ ။ကျုပ်တို့ဒီလိုနေနိုင်တာ ကျုပ်တို့ ပြုသမျှနု၊ လုပ်သမျှ ခံမယ့် ပြည်သူတွေရဲ့ ကျေးဇူးကလဲမသေးပေဘူးဗျာ။
ဒီတော့ ကျုပ်တို့က ကျုပ်တို့ သဘောထားအမှန်၊စေတနာမှန်ကို ပြသတတ်ရမယ်။ ဟုတ်ပါရဲ့လားကိုေ၇ွှပန်းရေ။
ရွှေပန်း။ ။ ဟုတ်ပါတယ်ဗျာ။ဟုတ်ပါတယ်။ ခုဆိုတပ်မတော်ရဲ့စေတနာမှန်ကိုပြသတဲ့အနေနဲ့ နာဂစ်လေဘေးရေဘေးဒဏ်
ခံပြည်သူတွေအတွက်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာကလှုဒန်းတဲ့ နိုင်ငံခြားဖြစ်ပစ္စည်းတွေကို ပြည်တွင်းဖြစ် တွေနဲ့ လဲလှယ်ဖြန့်ဝေခဲ့ပြီးပါပြီ။
ပန်းသေ။ ။ ဟေ့..ဟေ့.. ခုအဲဒီလဲ လို့ရလာတဲ့ ပစ္စည်းပစ္စယတွေရော၊မင်းတို့ ငါ့အိမ်ကိုပို့ပေးပြီးပြီလား။မပို့ရသေးဘူးဆိုရင် ခုပဲမြန်မြန်ပို့၊ဒါအမိန့်။
ဖျောင်ပြေး။ ။ ဟိုး ..ဟိုး .. စိတ်တွေမလောပါနဲ့ ဘပန်းရယ်။ ပို့လိုက်ပါပြီ။ပို့ပြီးပါပြီ။ လေဒီ ပန်းကိုယ်တော်တိုင် လက်ခံပြီးလို့ မယုံရင်မေးကြည့်နိုင်ပါတယ်။
ပန်းသေ။ ။ အေးကွယ်။သေခါနီးပြီဆိုတော့ တစ်ချက်တစ်ချက်ဒီလိုပဲ။ လူကြားထဲလဲ အိနြေ္ဒ မဆောင်နိုင်ဘဲ
ဖြစ်ဖြစ်သွားတတ်တယ်။ အဟွတ် ..အဟွတ် ..၊ခွင့်လွှတ်ကြပါ။ အဟွတ် ..အဟွတ် ..။
ရွှေပန်း။ ။ ဟ .. ဟ ၊လုပ်ကြပါဦး။ ပြောရင်းက ပဲ အမောကဖေါက်လာပြန်ပြီ။ ဆရာဝန်ခေါ်၊ဆရာဝန်အမြန်ခေါ်ကြပါဟဲ့။
ပန်းသေ။ ။ ရတယ်၊မခေါ်နဲ့ ။ဒီကဆရာဝန်တွေနဲ့မကုဘူး။ငါ့သားမက်ကြီးကို အဲဇလုံ လေယာဉ်ကြီး အမြန်ပြင်ဆင်ခိုင်းလိုက်၊
ဘိန်းဇိမ်။ ။ ဟဲ့ဟဲ့ တွဲမယ့်လူအမြန်ခေါ်လေ။ဟဲ့စင်အောက်က လူတွေလာကြပါဦး။သြော်၊ကားလိပ်ချလိုက်၊ကားလိပ်ချလိုက်။
……………… …………………… ……………………….. …………………………… ………………………… ………….
ပန်းသေ။ ။ အဟမ်း၊အဟမ်း … မင်းကြီးများ …
ပန်းသေ။ ။အိမ်း.. ဒီတစ်ခါတော့ ဒို့များ တော်ဝင်ဆန်ဆန်လေး၊ထီးနန်းဆန်ဆန်လေး ဖျော်ဖြေရအောင်လားကွယ်။
ကျန်၃ယောက်။ ။မှန်လှပါ.. ဖလား …..
ပန်းသေ။ ။ကဲ ဒါဆိုရင်လဲ .. ငါကိုယ်တော် ဘောင်းတော်ငြိမ့်ရင်စိတ်တော်သိကြတဲ့ မှုးကြီးမတ်ကြီး၊ဘူးသီးဘတ်သီးများ
ပန်းသေ။ ။အမယ်လေး .. ဘုရား ထူးတာလေးက ကျက်သရေရှိလိုက်လေခြင်း၊နားဝင်ချိုလိုက်လေချင်း … ဟိ .. ထူးစေချင်လွန်းလို့ ခဏ ခဏ ပြန်ပြောနေတာ …
ကျန်။ ။ တော်ပါတော့ ..ဖလား ……………..
ပန်းသေ။ ။ အင်းအင်း … တော်ခိုင်းရင်တော့ အများနဲ့တစ်ယောက်မို့တော် ပေးရမှာပေါ့ ။ ကဲ ..ကဲ .. မင်းကြီးများ အနေနဲ့
တိုင်းရေးပြည်ရာ အ၀၀ သော ကိစ္စများ ကို စိတ်မချမ်းမြေ့ စရာ၊ အလိမ်အညာ ကင်းကြောင်း များမှ လွဲ ပြီး .. မှန်ရာကို
ကျန်။ ။ ဒီလိုဆို ရင်တော့ လျှောက်တင်စရာ မရှိတော့ပါ ဖလား…..
ပန်း။ ။အိမ်း…. ဒါဆိုရင် ..ငါကိုယ်တော် ပိုင်ဆိုင်ရာ ရွှေပြည်ကြီးအတွင်း စိတ်မချမ်းမြေ့စရာတွေ၊ မတရားတာတွေ မရှိဘူးလို့မှတ်ယူတော်မူရလို့ အလွန်ပဲ စိတ်နှလုံးသာယာတော် မူပေတယ်။ ဒီလိုစိတ်ချမ်းသာ ဖွယ်ရာတွေဖြစ်အောင်
ကို လျှောက်တင်တတ်တဲ့ မင်းကြီး များကို ဆုတော်၊လာဘ်တော်များပေးသနားရန် ……
ကျန်။ ။ကျေးဇူးတော် ကို မမေ့ကြောင်းပါ….
ပန်း။ ။ ဟေ့ ..ဟေ့ .. ငါပြောတာမပြီးသေးဘူး..။ ဆုတော်၊လာဘ်တော်များပေးသနားရန် အိမ်က မိန်းမကြီးနဲ့ တိုင်ပင်လိုက်ဦးမယ် မင်းကြီးများ …
ကျန်။ ။(တစ်ယောက်မျက်နှာ တစ်ယောက်ကြည့်ပြီး) ကျေးဇူးတော်ကို မမေ့ကြောင်းပါ မယားကြောက်ကြီးနဲ့ သခင်မကြီးဖလား……
……………………… …………………………. ………………………………. ………………………………….. ……….
ငိုခြင်း ရီခြင်းကင်းတဲ့ အရပ်မှာ ခဏလောက်ရှင်သန်ဖူးပါရစေ။
လှော်ရင်း ကျိုးခဲ့တဲ့ တက်ပဲ့ နဲ့ လောကကြီးကို ရွဲ့ ပစ်ဦးမယ်။
ငါ့တစ်သက်မှာ တစ်ခါတည်းသော အချစ်စစ်ပဲရှိတယ်ဟေ့။
အမှိုက် တစ်စအတွက် ပြသာဒ် မီးလောင်မလောင်တော့မသိဘူး။
လူပြိန်းတစ်ယောက်ရဲ့ အတ္တကြောင့် လူတွေ မငြိမ်းနိုင်ဘူးလေ။
လူဆိုတာ ပုံစံခွက်ထဲက မွေးတာ မဟုတ်ဘူးတဲ့..ပြောတဲ့လူရှိတယ်။
ဒါပေမယ့် ပုံစံခွက်နဲ့ လူတွေတော့ရှိပါတယ်ဆိုတာတော့ သက်သေပြနိုင်ပါတယ်။
စပယ်ယာဆိုတဲ့ လူတွေနဲ့တော့ ရန်မဖြစ်ဖူးလေတော့။
အိမ်ပြန်နောက်ကျတဲ့ ကားခတွေလဲ ဈေးတက်နေတာမဆန်းတော့သလိုပဲ။
လေလွင့် တိုက်စားနေတဲ့ စိတ်ဓာတ်တွေအတွက်
လဖ္ကက်ရည်တစ်ခွက်နဲ့ တော့ အစားဖြည့်နိုင်ပ့ါမလား။
လူတွေကြည့်တဲ့ ကိုရီးယား ကားတွေ ငါမကြည့်ဘူး။
အတွဲတွေသွားတတ်တဲ့ ကန်တော်ကြီးကို ပုံမှန်ငါမရောက်ဖြစ်ဘူး။
စာတွေများများ ဖတ်မိလို့ ခုဆိုမနက်တိုင်းအန်နေတတ်ပြီ။
ဒါပေမယ့် အန်လိုက်တိုင်း သတင်းစာ အပိုင်းအစတွေ ။
တောက် …. တော်တော် လက်ကမြင်းတဲ့ကောင်၊တွေ့ရင်တော့လားကွာ။
ပြဿနာက ကိုယ့်ကို လာပတ်တာမျိုးကြုံဖူးကြလားဗျာ။
အနားမှာ လူဆိုတဲ့ အတ္တခဲများရောက်သွားရင်တော့ ဒီချိုးဟင်းတစ်ခွက်ဖြစ်မယ်နော်။
ရေကူးရင်း ရေငတ်နေလား၊ ဖောင်စီးရင်း ရေနှစ်နေလား။
နောက်ဆုံးတော့လဲငါသိလိုက်တယ် …. တစ်ကယ်တော့လေ … ဘ၀ ဆိုတာ
“နေတတ်မှ ကျေနပ်ဖို့ကောင်းတာပါတဲ့ …… “